Afrika - BBC Somali
Maraykanka oo duqaymo ka gaystay Liibiya
Maraykanka ayaa qaaday weeraro dhanka cirka ah oo ay ka gaysatay goobo ay Liibiya ka joogaan kooxda isku magacawday Dawladda Islaamka.
1 Agoosto 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Maraykanka oo duqaymo ka gaystay Liibiya
Nin internetka dadka ku dhici jiray oo la xiray
Booliiska caalamiga ah ayaa sheegay in ay xireen Nigerian ka dambeeyay kumaan khayaano oo dhanka Online-ka ah oo adduunka oo dhan ka dhacay
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Nin internetka dadka ku dhici jiray oo la xiray
Mudaaharaadyo ka socda Kinshasa
Tobanaan kun oo dibed baxayaal ah ayaa mudaharaad ka wada caasimadda Kinshasa ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
31 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Mudaaharaadyo ka socda Kinshasa
13 ku dhimatay weerar ka dhacay Muqdisho
Weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ayay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo toban ruux oo shan ka mid ah ay shacab yihiin.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan 13 ku dhimatay weerar ka dhacay Muqdisho
Trump oo lagu dhaliilay hadal uu jeediyay
Musharaxa madaxtinimada ee xisbiga Jamhuuriga Doland Trump ayaa dhaliil kala kulmay xisbigiisa Jamhuuriga iyo xisbiga kale ee uu loolanka kala dhaxeeyo ee Dimuquraadiga kaddib markii uu ku jeesjeesay hooyada askari mareykan ah oo lagu dilay dalka Ciraaq.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Trump oo lagu dhaliilay hadal uu jeediyay
R/wasaaraha Tunisiya oo kalsoonida lagala noqday
Ra’iisul wasaaraha dalka Tunisiya waxa uu ku guuldareystay cod kalsoonida ay kala noqdeen baarlamaanka.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan R/wasaaraha Tunisiya oo kalsoonida lagala noqday
UN: booliis ha la geeyo dalka Burundi
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa fasaxay in ciiddammo boolis ah oo caalami ah la geeyo dalka Burundi
30 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan UN: booliis ha la geeyo dalka Burundi
Turkiga: Nigeria iskuullo hanaga xiraan
Dawladda Turkiga ayaa Nigeria ka codsatay in ay xirto tiro iskuullo ah oo ay sheegtay in uu leeyahay Fetullah Gulen.
29 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Turkiga: Nigeria iskuullo hanaga xiraan
UNICEF oo hakisay hawlihii waqooyiga Nigeria
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay hakisay howlgalka bani'aadanimo ee ay ka waday Waqooyiga dalka Nigeria, oo ay dhibaata ka taagan tahay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan UNICEF oo hakisay hawlihii waqooyiga Nigeria
Nigeria: Jid tareen ee Abuja iyo Kaduna oo la furay
Madaxweynaha Nigeria ayaa furay jid tareen oo isku xira magaalo madax Abuja iyo magaalada Kaduna.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Nigeria: Jid tareen ee Abuja iyo Kaduna oo la furay